Sellfy: Vaka Yako Ecommerce Bhizinesi Rekutengesa Zvigadzirwa kana Kunyoreswa MuMaminiti | Martech Zone
Sellfy: Vaka Yako Ecommerce Bhizinesi Rekutengesa Zvigadzirwa kana Kunyoreswa Mumaminitsi
Chipiri, Zvita 14, 2021 Chipiri, Zvita 14, 2021 Douglas Karr
Kutengesa iri nyore kushandisa eCommerce mhinduro yevasiki vari kutsvaga kutengesa zvigadzirwa zvedhijitari uye zvemuviri pamwe nekunyoreswa uye kudhinda-pane-inodiwa - zvese kubva kune chimwe chitoro. Angave eBooks, mimhanzi, mavhidhiyo, makosi, zvinotengeswa, zvekushongedza pamba, mifananidzo, kana chero imwe mhando yebhizinesi.
Tanga nyore -Gadzira chitoro mune mashoma ekudzvanya. Saina, wedzera zvigadzirwa zvako, gadzirisa chitoro chako uye unorarama.
Kura hombe -Shandisa akavakirwa-mukati ekushambadzira maficha kuti ukure yako yekutengesa uye bhizinesi. Kunyangwe iwe uchida zvidzikiso, chigadzirwa-kutengesa-kutengesa, kana email sevhisi, Sellfy wakavhara.
Tengesa chero kupi - Svika vateereri vako uye utengese zvakananga pasocial media, yako webhusaiti kana chero kupi zvako uine tsika yekumberi.
Kutengesa vagadziri vanogona kubatanidza chitoro chavo kune webhusaiti iripo, shandisa chitoro chavo seyakanyanya dura, kana kutyaira traffic kubva kune mamwe machanera ane anoyevedza. Tenga izvozvi mabhatani uye mamwe embed sarudzo. Kutengesa zvakare inouya neakanaka akavakirwa-mukati ekushambadzira maturusi (email kushambadzira, makuponi, zvidzikiso, kusiya ngoro, kutengesa) uye analytics. Uyezve, zvinokwanisika kubatana ne2000+ yechitatu-bato mapurogiramu uchishandisa Zapier.
Chii chinoita Kutengesa zvakasiyana ndezvekuti isu takatarisana nekureruka. Iwe unogona chaizvo kuvaka chitoro chinoshanda zvizere mukati memaminitsi mashanu. Uchawana Kutengesa kukwana kwakanaka kana uri munhu anokoshesa zvikuru kureruka kwekushandiswa uye haadi kupedza nguva achidzidza.
Kutengesa inopa chirongwa chemahara chekutengesa kudhinda-pane-inoda uye zvigadzirwa zvemuviri. Uye zvirongwa zvese zvinouya pasina muripo wekutengesa. Kune matatu ekuwedzera zvirongwa zviripo: Starter, Bhizinesi, uye Premium. Zvirongwa izvi zvine mutengo wakatarwa wegore kana wepamwedzi-hapana mari yakavanzika kana mari yekutengeserana.
Tanga Yako Sellfy Yemahara Muedzo
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we Kutengesa uye ndiri kushandisa yangu affiliate link muchinyorwa ichi.
Tags: ngoro kusiiwaCouponszvigadzirwa zvemadhijitaridigital subscriptionskukanganisaecommerceecommerce kushambadziraecommerce chikuvaEmail Marketingkudzidza manejimendisellfykusimudzira
Calendly: Maitiro Ekuisa Iyo Kuronga Popup kana Yakamisikidzwa Kendari MuWebhusaiti Yako kana WordPress Saiti.